The Voice Of Somaliland: Xukuumada Riyaale oo Hub uqaybisey beel ka mid ah beelaha dega Gobolka Sanaag
Xukuumada Riyaale oo Hub uqaybisey beel ka mid ah beelaha dega Gobolka Sanaag
(Waridaad) - Saaka waaberigii ayaa Maleeshiyooyin aad ugu hubaysan hubka tiknikada ahi Xawaare aad u dheeraynaya ku mareen Wadooyinka Magaalada Ceerigaabo. Maleeshiyadan oo ka soo kicitimay magaalada Hargeysa ayaa la sheegay in xukuumadu Soo hubaysey. Maleeshiyadan ayaa la sheegay inay ka soo jeedaan Ardaaga Warsangeli, ku waasoo wiigagii la soo dhaafey colaadi ku dhexmartey Ardaaga Muuse Ismaaciil Tuulooyin dhinaca bariga kaga beegan Magaalada Ceerigaabo.
Maleeshiyadan ayaa la sheegay inay ku biirayaan maleeshiyooyin Beesha warsangeli ah oo difaac kaga jira Tuulooyin bariga ka xiga Degmada Ceerigaabo. Lama garanayo sababta Xukuumadu u taageertey beel ka mid ah beelaha Gobolka wada dega. Xukumadu miyaan Xil ka saareyn qaboojinta Colaadaha dadka wada dhashay ee deegaanka iyo wadadhalashaduba ka dhaxayso.
Dadweynaha reer Ceerigaabo ayaa arinkaas ku tilmaamay ayaan daro, mar hadii bay yidhaahdeen xukuumadii dadka u dhaxaysey iyadu ka qayb qaadanayso hurinta Colaadaha.
Wixii wara ah ee soo kordha la soco Garadag.org.
Posted by Ahmed Quick Ahmed Quick at Tuesday, April 15, 2008